Ngwunye mgbanyụ ahụ kpụrụ maka ịgbachapụ dabara adaba iche.
Mmepụta nke ohere nke igwe dị na mmepụta nke biarins nke nwere ike ịrụ ọrụ na ọsọ ọsọ na-agbagharị. Bearingdị ụdị ọhụụ nke a na-eji ụlọ ọrụ igwe eji arụ ọrụ bụ mmịpụta nnabata nke induction. Bearinggbaso ahihia nwere otutu uru. Indoction kpo oku achọghị ihe na-eme ka ihe dị ụtọ. Onweghi nmekorita nke di n'etiti akuku oru ihe aru oru. Ọ na-arụ ọrụ na idere duu na obere esemokwu. Ndụ ndu a dị ogologo ndụ karịa nke nke ot.
Zọ nyocha maka nyocha nke nsogbu ọgbụgba na ebubata mgbanye adịghị adaba.
Maka ihe atụ a, anyị na-eji usoro mmezu iji mepụta ngụkọta oge. A ga-eji nlezianya nyochaa kpo oku nke ntanye nsị, mgbe ọdịiche dị n'etiti akụkụ ọrụ na-arụ ọrụ pere mpe n'ihi na mmụba nke okpomọkụ nwere ike ime ka ihe njide ahụ jide ……
nnabata kpo oku
Categories Induction kpo oku PDF Tags nnukwu ugboro, nnukwu onyu oku eji agba oku, mmata ọmụmụ, ntinye na-ebu oku, induction na-ebute igwe ọkụ pdf, ndenye na-ebute pdf, mmeputa kpo oku, induction kpo oku na eme pdf, itinye aka na iwepu ihe kwesiri ekwesi Mail igodo
Itinye n'ọkwa Heating isi PDF